Yesaia 41 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
41 “Nsuano aman, monyɛ komm ntie me;+ na amanaman+ nnya ahoɔden foforo. Ma wɔmmra+ mmɛkasa. Momma yemmom nhyia asɛnnii.+ 2 “Hena na wanyan obi afi owiapuei?+ Hena na ɔde trenee frɛɛ no baa ne nan ase sɛ ɔde amanaman bɛba n’anim, na ɔde ahene ahyɛ n’ase?+ Hena na ɔde wɔn maa no sɛ mfutuma wɔ ne nkrante ano a wabɔ wɔn apete te sɛ ntɛtɛwa wɔ n’agyan ano yi?+ 3 Hena na otiw wɔn na ɔde asomdwoe fa ɔkwan a ne nan nsii so da so? 4 Hena na ɔde ahoɔden+ yɛɛ eyi, na ɔfrɛ awo ntoatoaso mmiako mmiako fi mfiase?+ “Me Yehowa, mene Odikanfo+ na akyikafo mu nso sɛnea mete ara na mete.”+ 5 Nsuano aman+ hui na wosuroe. Asase no afanan nyinaa ho popoe.+ Wotwiw bɛnee na wɔbae. 6 Obiara boaa ne yɔnko, na obiara ka kyerɛɛ ne nua sɛ: “Hyɛ wo ho den.”+ 7 Odwumfo hyɛ ɔtomfo den,+ na nea ɔde asae yɛ ho toromtorom no hyɛ nea ɔbɔ ɔtommo so no den, na nea wɔasosɔw abom no nso, ɔka ho asɛm sɛ: “Eye.” Afei obiako de nnadewa bobom na anhinhim.+ 8 “Israel, woyɛ m’akoa;+ Yakob, wo na mapaw wo,+ m’adamfo Abraham+ aseni.+ 9 Wo na mefaa wo fii asase ano nohoa bae,+ na mefrɛɛ wo fii n’ahye so.+ Na meka kyerɛɛ wo sɛ, ‘Woyɛ m’akoa;+ wo na mapaw wo,+ na mempoo wo.+ 10 Nsuro efisɛ meka wo ho.+ Mma w’ani nnyɛ wo totɔtotɔ, na mene wo Nyankopɔn.+ Mɛhyɛ wo den.+ Mɛboa wo.+ Mede me trenee+ nsa nifa beso wo mu denneennen.’+ 11 “Hwɛ, wɔn a wɔn bo afuw wo nyinaa bɛfɛre na wɔn anim agu ase.+ Nnipa a wɔne wo ham no betwam akɔ na wɔn ase atɔre.+ 12 Wɔn a wɔne wo di aperepere no, wobɛhwehwɛ wɔn nanso worenhu wɔn.+ Wɔn a wɔne wo ko no bɛyɛ sɛ biribi a enni hɔ, adehunu bi.+ 13 Me Yehowa wo Nyankopɔn, mikura wo nsa nifa mu;+ na meka kyerɛ wo sɛ, ‘Nsuro,+ na me ara mɛboa wo.’+ 14 “Nsuro, osunson+ Yakob, Israel+ mmarima. M’ankasa mɛboa wo,” wo Gyefo+ Yehowa, Israel Kronkronni no, anom asɛm ni. 15 “Hwɛ, mayɛ wo awiporow afiri,+ awiporow ade foforo a n’anofanu nyinaa wɔ sẽ. Wubetiatia mmepɔw so ma abubu pasaa; wobɛma nkoko ayɛ sɛ ntɛtɛwa.+ 16 Wubehuw+ so na mframa asoa akɔ,+ na ahum abɔ apete.+ Wo de, Yehowa mu na wubedi ahurusi.+ Israel Kronkronni no na wode no bɛhoahoa wo ho.”+ 17 “Abrɛfo ne ahiafo hwehwɛ nsu,+ nanso ebi nni hɔ. Osukɔm+ nti wɔn tɛkrɛma so awo.+ Nanso me Yehowa, megye wɔn so.+ Me, Israel Nyankopɔn, merennyaw wɔn.+ 18 Mɛma nsu asen nkoko so na nsuwansuwa atue asasetaw so.+ Mɛma sare adan ɔwora na asase kesee adan asuti.+ 19 Mɛma kyeneduru, ɔkanto, ohuadua, ne ngodua anyin wɔ sare so.+ Na mɛma ɔpopaw dua, ɔsɛsɛ ne kwabɔhɔrɔ dua abom aba asase pradada so,+ 20 na ama nnipa ahu ate ase, na wɔde ato wɔn koma so na wɔahu no fann wɔ wɔn adwenem prɛko sɛ Yehowa nsa na ayɛ eyinom, na Israel Kronkronni no ankasa na ɔbɔe.”+ 21 “Momfa mo asɛm+ mmɛto gua,” Yehowa na waka. “Mummeyi mo ho ano,”+ Yakob hene+ asɛm ni. 22 “Mommɛkyerɛ yɛn nea ebesi. Monkyerɛ yɛn nneɛma a edi kan no, na yennwennwen ho na yenhu nea ɛbɛba daakye. Na nneɛma a ɛreba no nso, momma yɛnte.+ 23 Monka nea ɛbɛba akyiri yi na yenhu sɛ moyɛ anyame ampa.+ Monyɛ papa anaa bɔne na yenhu na yɛnhwɛ prɛko.+ 24 Hwɛ, moyɛ biribi a enni hɔ, na mo nnwuma yɛ adehunu.+ Obiara a ɔbɛpaw mo no yɛ akyide.+ 25 “Manyan obi afi atifi fam, na ɔbɛba.+ Ofi owiapuei+ bɛbɔ me din. Na ɔbɛba asoafo so te sɛ dɔte,+ te sɛ ɔnwemfo a ɔrewɔw dɔte. 26 “Hena na waka biribi fi mfiase a yebetumi ahu, anaa waka biribi fi tete a yɛbɛka sɛ, ‘Ɔyɛ ɔnokwafo’?+ Obiara nni hɔ a waka biribi. Obiara nni hɔ a wama ɔfoforo ate biribi. Obiara nni hɔ a wate mo nsɛm.”+ 27 Me na midi kan, na meka kyerɛ Sion sɛ: “Hwɛ, wɔn ni!”+ na mɛma nea okura asɛmpa aba Yerusalem.+ 28 Mehwɛe ara, nanso manhu obiara, na wɔn mu biara nso nni hɔ a otu fo.+ Mibisaa wɔn ara sɛ anka wɔbɛma me mmuae. 29 Hwɛ, wɔn nyinaa yɛ biribi a enni hɔ. Wɔn nnwuma yɛ adehunu. Wɔn dade ahoni yɛ mframa ne ahuhude.+